Izvo zvikonzero zvinomwe nei usinganyore | Zvazvino Zvinyorwa
Zvikonzero zvinomwe nei usinga nyora
Iwe unomuka uye unonwa kofi yakafanana neyemangwanani oga oga. Makuki, senguva dzose, anodonha kutanga mukombe. Unoputa fodya uchienda kubasa, unodya saradhi iya ine vinaigrette uye nenguva yaunodzoka kumba ukavhura komputa yako uchiri kuiona irimo, iro faira reIzwi rakavimbisa zvakawandisa uye mausina kumboshinga kuenderera mberi nekunyora nekuda kwechikonzero; imwe pamwe inosanganisirwa mune inotevera 7 zvikonzero nei usinga nyora.
1 Hauna nguva
2 Zvimwe zvinokosheswa
3 Hapana achaverenga basa rako
4 Pfungwa dzinodzora
5 Kufuridzirwa hakuuyi
6 Nharembozha. . .
7 Iwe hautendi mune ako mazano
Iye munhu akataura kuti kunetsekana ndiko kwakanyanya kuipa kwezana ramakumi maviri nemasere raive risina kukanganisa, kutonga nekuwedzera maitiro, pfungwa dzakazara nemabasa madiki atisingakwanise kumirira kugadzirisa. Tsvaga nguva yekuzvitsaurira kuhunyanzvi hwedu Izvo zvinova zvakaoma, uye kunyange zvinoshungurudza, apo isu patinozvipira isu kune rimwe basa iro rinotiunzira isu mabhenefiti emari. Zvakaoma ... asi hazvigoneke, kunyanya kana kushingairira kwako uye kuvimba mune zvaunoita uchigona. Kana zvisati zvaringana, ndine chokwadi chekuti zvimwe zvacho Matipi mashanu ekutsvaga nguva yekunyora vachakubatsira zvikuru.
Kusiyana nepfungwa yekutanga, panguva ino ticha simbisa izvo zvimwe "zvakakosha" izvo zvisina kudaro. Kana zvakatonyanya, ivo havaiti kuti tifare. Nekuti dzimwe nguva kunyora paunenge uchizvida zviri nani pane kuenda mutangi kwezuva rechitatu rakateedzana uye kushanda nguva yakawandisa isingambokubhadhare pane kushandisa nguva uchinyora chokwadi chisina kugadzikana icho, munguva pfupi inotevera.
Hapana achaverenga basa rako
Makore mashoma apfuura, funga kuita raramo nekunyora chaive chimwe chinangwa chakaoma. Vakabva vauya kuiswazve kwevamwe vaparidzi, kutaridzika kwekuzvitsikisa-mapuratifomu kana kupatsanurwa kunoitwa nemablog kuve vabatsiri vakakwana vemunyori muzera reInternet. Zvishandiso zvinowanikwa kune chero munyori anotsvaga, nenzira dzake, kuzviita anozivikanwa kana kubudirira nechido chake.
Dzimwe nguva, uye munguva dzisingatarisirwi, unoshamiswa nepfungwa yekuti unofanirwa kumhanya kunonyora mukabhuku. Unoti iwe pachako, asi nekufamba kwemazuva, inotanga kuzvishambidza sechigadzirwa chekuzvidya mwoyo kwako. Iwe unoda kuti zvisikwa zvifambe nekukurumidza semafungiro pachawo, asi chokwadi ndechekuti chivakwa chakanaka chinokodzera kuvandudzwa kuti chienderane kana uchichinja vimbiso yekutanga kuita chimwe chinhu chikuru. Shingirira nemazano akanaka, kubheja pane kwavo kukura uye edza kugadzira chimiro chakakodzera uchichengetedza iko kwekubwinya.
Kutaura nyaya yekufemerwa kunogona kutora inopfuura kamwe chete posvo, asi pakupedzisira zvese zvinodzikira kumubvunzo wakapusa: sei kurudziro isingasvike? Mamiriro ehunhu angave ari pamwe anokonzeresa kune iro gwenga umo musina zvitubu, zvakare zvishoma zvinokurudzira maitiro kubva zvatisingakwanise kutora trace yekutanga. Kana kurudziro ikasasvika kwauri, tsvaga, verenga zvinyorwa uye zvinyorwa zveblog, tamba mitambo, shandisa art kana edza iro basa iro rinogara richivhura musuwo wemazano (Kwandiri, zvinoshamisa, zvinowanzo kupenda mandalas kana ... kusuka ndiro, usandibvunze kuti nei ...)
Nharembozha. . .
Zvinotaridza kuti kana nharembozha isingaridze iwe hausi munhu, chokwadi chave kutiita varanda vedu smartphones Mumakore apfuura. Vamwe vanozvidaidza nanophobiaVamwe kutambisa nguva isu tisingazive pakutanga, apo kutarisisa kuchipararira uye izvo zvakakosha zvemunyori zvichidzoserwa. Zvinoitika kune vazhinji kuti vanonyudzwa mune huru nyaya kudzamara ziviso yavakanganisa. Mushure mezvo, anoenda kune chinongedzo pamabikirwo eIndia uye anopedzisira aona vhidhiyo yemakati paYouTube apo shungu dzakadururwa pabasa rake dzichinyangarika uye anotora nguva yakareba kuti adzoke. Chimwe chezvikonzero zvakavanzika zvausinganyore.
Iwe hautendi mune ako mazano
Iwe wauya nezano rakakura kana, zvirinani, rako nderewe, nekuti hapana kana dzimwe nyaya dzakafanana kana mareferenzi anogona kunyudza iwo mavambo epfungwa yako. Nekudaro, kazhinji nguva kusanganiswa kwemazano akanaka nekusagadzikana kana kuzvitarisira pasi kunogona kududzira mune chisina chokwadi chokwadi kuti hapana anonzwisisa iyo nyaya kupfuura iwe, kuti zvakakosha kunyora "Shades of Grey" kana "Twilight" kusvika kuvanhu vazhinji. Zvingave zvakadaro, asi zvinosuwisa kusapa mukana iwoyo kunyaya isina mumwe munhu akagadzira kare.
Ndechipi chikonzero nei usinga nyora pane dzimwe nguva?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Zvikonzero zvinomwe nei usinga nyora
Trajano Trilogy, naSantiago Posteguillo. Makore mazana gumi nematanhatu mushure mekufa kwamambo mukuru weSpain.
Mabhuku maviri matsva eHarry Potter anoburitswa munaGumiguru